Ny Sony Xperia M4 Aqua amin'ny horonantsary avy amin'ny MWC 2015 | Androidsis
MWC 2015: Atorinay anao ny Sony Xperia M4 Aqua, ivontoerana 64 Bit Octa avy any Sony izay latsaky ny 300 euro
Francisco Ruiz | | MWC, hevitra, Sony
Sony dia tsy te-tsy hahita ny fanontana farany an'ny Mobile World Congress ary fitaovana roa naterina tao an-tanànan'i Barcelona. Ny iray tamin'izy ireo Sony Xperia M4 Aqua, mpandimby ny M2 ary mikendry ny hanana toerana eo amin'ny tsena antonony.
Ary ny fampiasa azy dia midera azy eo an-tampon'ny afovoany afovoany, satria tsy tonga fitaovana ambony, ny mampiavaka azy ara-teknika dia mahatonga ny Sony Xperia M4 Aqua terminal ho tena raisina. Noho izany dia entinay ianao a famakafakana video izay asehonay anao ny pitsopitsony rehetra amin'ny Sony Xperia M4 Aqua.
Sony Xperia M4 Aqua, elanelam-potoana misy fanahin-tsaina
Raha mijery ny horonantsary dia mazava fa te hanome i Sony Sony Xperia M4 Aqua ho an'ny fijery premium ary tena mitovy amin'ny Sony Xperia Z3. Rehefa raisinao izy dia hitanao fa vita ny plastika, na dia mahazo aina sy mahafinaritra aza ny terminal.
Amin'ny lafiny ara-teknika dia mahita ny tenantsika amin'ny fitaovana matanjaka isika, manomboka amin'ny efijery natsangan'ny tontonana 5-inch izay mahatratra ny vahaolana 720p. Eo ambanin'ny hood an'ny Sony Xperia M4 Aqua dia misy processeur Qualcomm Snapdragon 615 miaraka amina maritrano 64-bit, ankoatry ny fananana RAM 2 GB.
Sony dia manohy miloka amin'ny masolavitra misy ny fampiasa ao aminy ary tsy ho latsa-danja kokoa ny Sony Xperia M4 Aqua. Amin'izany no ahitantsika solomaso Fakantsary lehibe 13 megapixel, ankoatry ny fakantsary eo anoloana 5 megapixel. Ny batterie 2400 mAh dia ho tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny lanjan'ny fitaovana rehetra amin'ity fitaovana ity.
Raha ny fahatsiarovana, hisy kinova maromaro miaraka amin'ny 8 GB sy 16 GB na dia eo amin'ny tsena eropeana aza dia hitazona ny kinova miaraka amin'ny fahaiza-manao kely izahay. Soa ihany, ireo zalahy ao amin'ny Sony dia nanisy slot micro SD izay hampitombo ny fahatsiarovana ny Sony Xperia M32 Aqua hatramin'ny 4 GB.
Mikasika ny vidiny sy ny daty fanombohana, ny Sony Xperia M4 Aqua dia andrasana hamely ny tsena mandritra ny volana manaraka amin'ny vidin'ny 299 euros. Fantsona midadasika somary matanjaka izay mihoatra ny manatanteraka ny asany: maha-iray amin'ireo elanelan-tany matanjaka indrindra eo amin'ny tsena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » MWC 2015: Atorinay anao ny Sony Xperia M4 Aqua, ivontoerana 64 Bit Octa avy any Sony izay latsaky ny 300 euro
David colorado dia hoy izy:
@sonyxperiaes sy ny z3 na dia tsy misy lolisy aza. Mahamenatra.
Valiny tamin'i David Colorado
MWC 2015: LG Magna amin'ny horonan-tsary. Android afovoany mahaliana
MWC 2015: Notsapainay ny Sony Xperia E 4G, ny terminal farany ambany an'i Sony